Red Hat pane supercomputers. 4 yegumi zvine simba kwazvo ishandise | Linux Vakapindwa muropa
Red Hat pane supercomputers. 4 yegumi zvine simba kwazvo ishandise
Red Hat, Inc. yakazivisa kuti siwe Red Hat Enterprise Linux chigadzirwa ndicho chinoshanda system hwaro hwevatatu vepasirose yepamusoro vatatu uye vana vepamusoro gumi in the 500 runyorwa izvo zvinoumba chinzvimbo.
1 Red Hat pane supercomputers. Iwo mana anoshandisa Red Hat Enterprise Linux
Red Hat pane supercomputers. Iwo mana anoshandisa Red Hat Enterprise Linux
Munzvimbo dzepamusoro gumi pane iripo TOP500 runyorwa, Red Hat Enterprise Linux inoshanda sisitimu yekushandisa ye:
Fugaku, komputa huru inokwidza chinzvimbo ichi uye iri paRIKEN Center yeComputational Sayenzi muKobe, Japan.
Summit, yechipiri-nzvimbo supercomputer, iri ku Oak Ridge National Laboratory mu Oak Ridge, Tennessee.
Sierra, iyo inove chechitatu, inoshandiswa kuLawrence Livermore National Laboratory muLivermore, California.
Marconi-100, yakatarwa yepfumbamwe, yakavakirwa kuCINECA yekutsvagisa nzvimbo muItaly.
Fugaku ari eYekutanga ARM processor-based system yekumisikidza yekutanga pane TOP500 runyorwa. Kubudirira kwayo kwakatanga mu2014 uye inotarisirwa kuzadzikiswa zvizere muna2021.
Iyo supercomputer eIyo yakavakwa ne Fujitsu A64FX microprocessor. Iyi CPU yakavakirwa pane iyo ARM vhezheni 8.2A processor yekuvakisa, uye inotora Scalable Vector Kuwedzeredzwa kune makuru makomputa. Fugaku inotarisira tarisiro yekuita ye1 exaFLOP iyo yaizoshandisa 158.976 A64FX CPUs akabatanidzwa pamwechete achishandisa yekombiki yekubatanidza tekinoroji yakagadzirwa naFujitsu.
Fugaku Inomhanya isingaremi yakawanda-yepakati inoshanda sisitimu inonzi IHK / McKernel. Iyo sisitimu yekushandisa inoshandisa zvese Linux uye isina kurema McKernel kernel inoshanda panguva imwe chete uye padivi nedivi. Izvo zvivakwa zvinoshandiswa nekwese kernels zvinodaidzwa kuti Chinongedzo cheHeterogeneous Cores (IHK).
McKernel inoshandiswa pakuenzanisa kwepamusoro-soro, ichisiya Linux kuti itarisire mamwe ese masevhisi anoenderana nePOSIX.
Summit, Sierra neMarconi-100 vane zvivakwa zvakavakirwa paBM POWER9 neNVIDIA GPUs; Yakasanganiswa, aya mana masisitimu anogadzira anopfuura 680 petaflops ekugadzirisa simba kupa simba rakasiyana siyana rekutsvaga kwesainzi.
Summit yakagadzirwa neBM uye inokwanisa mazana maviri petaFLOPS. Ndiyo yekutanga komputa yepamusoro kuzadzisa kumhanya kwe exaflop (quintillion mashandiro pasekondi), logrando 1,88 exaflops panguva ye genomic ongororo uye inotarisirwa kusvika 3,3 exaflops uchishandisa yakavhenganiswa chaiyo kuverenga.
Ciye anoshandisa system anoshandisa Red Hat Enterprise Linux uye Hardware yayo inoumbwa ne 216 POWER9 22-core CPUs uye 27,648 Nvidia Tesla V100 GPUs. POWER9 CPUs uye Volta GPUs zvakabatana uchishandisa Nvidia's-inomhanya-mhanya NVLink.
Sierra yakafanana chaizvo mukugadzirwa neSummit supercomputer yakurukurwa pamusoro. Sierra system inoshandisa IBM POWER9 CPU pamwe chete neNvidia Tesla V100 GPUs. Sierra node ari maWitherspoon S922LC OpenPOWER maseva ane maGPU maviri paCPU uye mana maGPU panodhi. Aya maodhi akabatana neEDR InfiniBand. Kuita kwayo ndeye 125 petaflops.
Iyo Marconi 100 haina kunyanyosiyana zvakare. kuburitsa kwakakura kweanenge makumi matatu nemasere Pflop / s, iyo yemukati network inoshanda neMellanox Infiniband EDR DragonFly + tekinoroji. MARCONI100 Iyo yakavakirwa pane IBM Power9 dhizaini neNVIDIA Volta GPUs.
Kana iwe uri fan of nharaunda, avo vari muhope dzvuku vanopfekawo ngowani yegirini.
Red Hat Enterprise Linux ndiyo yeLinux-based operating system yevatanhatu pavane gumi vane simba-rinoshanda kwazvo pasi. Mune ino kesi, zvese mashandiro uye simba rakadyiwa kuzadzisa izvi zvinotarisirwa.
Mune gumi epamusoro pane akanyorwa, Red Hat Enterprise Linux inoshanda sisitimu yekushandisa ye:
Iyo A64FX prototype, (nzvimbo nhamba yechina) yakagadzirwa senge prototype system yekuyedza nekuvandudza iyo Fugaku supercomputer uye iri panzvimbo yeFujitsu muNumazu, Japan.
AIMOS (nzvimbo yechishanu) iri kuRensselaer Polytechnic Institute muTroy, New York.
Satori (Yakarongwa XNUMXth) yakavakirwa paMIT Massachusetts Green High Performance Computing Center (MGHPCC) muHolyoke, Massachusetts.
Yechisere, yechipfumbamwe neyegumi nzvimbo ndeyeMusangano wataurwa pamusoro apa, Fugaku naMarconi-110
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Red Hat pane supercomputers. 4 yegumi zvine simba kwazvo ishandise
GnuCash 4.0 inosvika iine mashoma shanduko, asi inosimbisa yayo nyowani CLI kushandiswa
Chrome OS ichatibvumidzawo kutamba Steam mazita